ဝန်ကြီးဌာနစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှစ၍ ယနေ့ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၁. ဦးဘေစာ ၇.၉.၁၉၅၃ မှ ၂၇.၂.၁၉၅၉
၂. သတိုးမဟာသရေစည်သူသီရိသုဓမ္မဦးလွန်းဘော် ၂၇.၂.၁၉၅၉ မှ ၄.၄.၁၉၆၀
၄. ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့် ၅.၃.၁၉၆၂ မှ ၃.၁၂.၁၉၆၃
၅. ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လွင် ၃.၁၂.၁၉၆၃ မှ ၂၄.၃.၁၉၇၀
၆. ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဖေ ၂၄.၃.၁၉၇၀ မှ ၁၄.၁၁.၁၉၇၀
၇. ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းဒန် ၁၄.၁၁.၁၉၇၀ မှ ၄.၃.၁၉၇၄
၉. ဦးမန်းစံမြတ်ရွှေ ၃.၃.၁၉၇၈ မှ ၂၀.၃.၁၉၇၉
၁၀. ဦးမြမောင် ၂၀.၃.၁၉၇၉ မှ ၂၈.၁.၁၉၈၀
၁၁. ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်အုန်း ၂၈.၁.၁၉၈၀ မှ ၁၆.၁၀.၁၉၈၀
၁၂. ဗိုလ်ချုပ်ချစ်လှိုင် ၁၆.၁၀.၁၉၈၀ မှ ၉.၁၁.၁၉၈၁
၁၃. ဦးအုန်းကျော် ၉.၁၁.၁၉၈၁ မှ ၁၈.၉.၁၉၈၈
၁၄. ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ရဲကျော် ၂၀.၉.၁၉၈၈ မှ ၉.၂.၁၉၈၉
၁၅. ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ထွန်း ၉.၂.၁၉၈၉ မှ ၁၉.၂.၁၉၉၂
၁၆. ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းမြင့် ၁၉.၂.၁၉၉၂ မှ ၁၅.၆.၁၉၉၅
၁၇. ဗိုလ်ချုပ်စိုးမြင့် ၁၅.၆.၁၉၉၅ မှ ၁၅.၁.၁၉၉၇
၁၈. ဗိုလ်မှူးချုပ်ပြည့်စုံ ၁၅.၁.၁၉၉၇ မှ ၂၉.၁၀.၁၉၉၉
၁၉. ဗိုလ်ချုပ်စိန်ထွား ၂၉.၁၀.၁၉၉၉ မှ ၁၄.၅.၂၀၀၆
၂၁. ဦးအောင်ကြည် ၃၁.၃.၂၀၁၁ မှ ၂၇.၈.၂၀၁၂
ဝန်ကြီးဌာန စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှစ၍ ယနေ့ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
၁၁. ဒေါ်စုစုလှိုင် ၂၇.၈.၂၀၁၂ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆
၁၂. ဦးစိုးအောင် ၂၇.၉.၂၀၁၇ မှ ယနေ့ထိ
Hit Counter :: 31639